Aga m eme ihe n'eziokwu ma kweta na agbagharala m n'asọmpi n'ịntanetị. Ọtụtụ afọ gara aga, anyị nwere asọmpi mgbasa ozi mmekọrịta mpaghara iji chọta nwoke na nwanyị kasị ewu ewu na obodo. Mgbe m lere isi iyi nke ibe asọmpi ahụ, achọpụtara m ngwa ngwa na m nwere ike itinye votu naanị site na ịga na URL a kapịrị ọnụ nke etinyere na koodu ahụ. Onye mmepe nke asọmpi ahụ chere na ọ na-aghọ nkọ ma na-egbochi onye ọ bụla na-abịa site n'otu adreesị IP ahụ.
Tupu ị maa m ikpe, abịara m na-adị ọcha tupu m merie n'asọmpi ahụ. Edere m onye mmepe ahụ ma mee ka ọ mata na m ghọgburu. Agwara m ihe omume ahụ banyere otu ọ si dị mfe ịghọ aghụghọ n'egwuregwu n'ịntanetị. Ohere bụ na ọ bụrụ na ndị mmepe gị akụrị mpi n'ịntanetị, ị ga-emeghe ọnụ ụzọ ịghọ aghụghọ ule. Achọpụtala m ọtụtụ narị asọmpi n'ịntanetị ma ọ tụrụ m n'anya na ọtụtụ ndị na-eji ụzọ ndị a dị mfe nnabata ndị aghụghọ.